Atletico Madrid waa horyaalka Spain - BBC News Somali
Atletico Madrid waa horyaalka Spain
Image caption Kooxda Atletico Madrid oo u dabaal degayso horyaalka La Liga ee Spain
Kooxda Atletico Madrid ayaa markii ugu horreysay ku guulaysatay horyaalka La Liga tan iyo 1996-dii, kaddib markii ay barbaro 1-1 la gashay kooxda Barcelona.
Atletico Madrid ayaa qeybtii labaad ee ciyaarta ku soo gashay si xooggan kaddib markii David Villa, uu birta ku dhuftay kubad ka hor inta aanu Diego Godin uu madaxa ku dhalin goolka barbaraha.
Barcelona ayaa koobka qaadi laheyd haddii ay guul ka gaari laheyd ciyaartii xalay.
Ciyaarta ayaa 90-ka daqiiqo ku soo gebagebowday 1-1, taasna waxa ay kooxda Atletico Madrid ka dhigtay in ay 3 dhibcood oo nadiif ay ku qaaday horyaalka La Liga, kaddib markii ay aruursatay 90 dhibcood, waxaana ku soo xigay kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo helay min 87 dhibcood.
Ciyaarta markii ay dhamaatay ayaa garoonka waxaa isqabsaday dabaal deg iyo damaashaad ay sameynayeen kooxda Atletico Madrid oo marti ku aheyd garoonka Nou Camp, ee kooxda Barcelona.
Waa markii tobnaad oo kooxda Atletico Madrid ay ku guulaysato horyaalka Spain ee La Liga, waana markii ugu horreysay muddo 10 sano ah oo koox aan Barcelona ama Real Madrid aheyn ay ku guulaysato horyaalka Spain.
Halkaana kooxda Atletico Madrid waxaa ugu soo gebageboobay xilli ciyaareed aad u wanaagsan oo ay guul lama ilaawaan ah ku maquunsatay horyaalka.
Kooxda ayaa haatan diiradda saari doonto ciyaarta finalka horyaalada Yurub, taasoo ay kaga hor imaan doonto kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Real Madrid, maalinta Sabtida ee soo socota.
Dibadbaxyo ka dhan ah koobka aduunka
16 Maajo 2014
Chelsea oo tababare laga ganaaxay
2 Maajo 2014
Chelsea oo laga burburiyay Rajadeeda